यसरी खोलौं कृषिमा विदेशी लगानी :: Setopati
मुराहरि पराजुली माघ ५
विदेशी लगानी बहसः
खुला गरिएको भनिएका क्षेत्रका व्यवसायीले विरोध गर्नु नौलो होइन। लागे-पुगेसम्म आफ्नो व्यवसायमा अर्को प्रतिस्पर्धी नआओस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ। व्यवसायीहरू गर्नलाई प्रतिस्पर्धाको वकालत गर्छन्, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको विरोध गर्छन् तर आफ्नो व्यवसायमा संरक्षण खोज्छन्। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, सेवा, व्यापार सबै क्षेत्रका व्यवसायीले संरक्षण खोज्छन्।
स्वदेशी उद्योगको नाममा खोजिने संरक्षण (कर छुट, उत्पादनमा अनुदान, विदेशी आयातमा प्रतिबन्ध, कोटा निर्धारण, उच्च भन्सार महसुल, देशमा उत्पादित वस्तु निर्यातमा अनुदान आदि) सबभन्दा धारिलो अर्थ-राजनीतिक हतियार हो। यसले राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायी दुवैलाई उच्चतम लाभ दिन्छ।
'उत्पादन भने बढेन,' समूहका नेताले भने, 'पहिले जति धान फल्थ्यो, अहिले पनि त्यति नै फल्यो। खर्च मात्रै उठ्यो।'
मैले उनलाई सोधेँ, 'उसो भए तपाईंहरूलाई के फाइदा भयो त?'
उनले भने, 'खासै फाइदा भएन। पहिलोचोटि भएर होला!'
एकछिनपछि उनको अनुहार उज्यालो भयो। केही सम्झिएजस्तो गरी भने, 'सरकारले दिएको दस लाख अनुदान चाहिँ फाइदा भयो।'
'जोसुकैले यही गर्ने त हो नि! सरकारमा हाम्रा मान्छे नभएका भए अनुदान कहाँ पाउँथ्यौं र?' उनले भने।
सिंगापुरका संस्थापक प्रधानमन्त्री ली क्वान यु भन्थे, 'चाहेर पनि हामीलाई पर्याप्त हुने गरी कृषि उत्पादन गर्न हामी सक्दैनौं। तर हामीले संसारको जुनसुकै भागमा हुने उत्पादन किनेर खान सक्नुपर्छ।'
त्यसमा लेखिएको छ, 'कृषि जस्तो सर्वसाधारणको जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने एउटा तर्क छ भने बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न एवं उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानी र प्रविधि आवश्यक रहेको विषय पनि उठेको छ।'
संरक्षणका नाममा आफ्नो पुँजी, प्रविधि, सीप आदि नपुगेर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने क्षेत्रमा सरकारी अनुदानको त्यान्द्रोमा अल्झाइ राख्दा किसानको हित हुँदैन, उपभोक्ताले लाभ पाउँदैनन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ५, २०७७, ०२:१४:००
मिथिला शर्मालाई प्रश्नः घरमा आफ्नाले नदिएको समानता बाहिरको कसले दिन्छ?
सरकारी स्कुलमा चक्कर लगाउँदा...